Qiimaha Lacageed Ee Ay Maamulka Arsenal U Diyaariyeen Unai Emery Ee Uu Suuqa La Gali Doono Iyo Jamaahiirta Arsenal Oo Si Wayn Uga Cadhaan Doonta - Gool24.Net
Qiimaha Lacageed Ee Ay Maamulka Arsenal U Diyaariyeen Unai Emery Ee Uu Suuqa La Gali Doono Iyo Jamaahiirta Arsenal Oo Si Wayn Uga Cadhaan Doonta
Maamulka kooxda Arsenal ayaa u muuqda kuwo aan waxba ka badalayn dhaqankii ay isku seegeen jamaahiirta kooxooda ee ahaa in ay lacago aad u yar u qorsheeyaan suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Arsenal ayaa sanado badan ku soo dhibtoonaysay in ay kooxaha Yurub ee waa wayn kula tartami karto ciyaartoyda ugu tayada badan ee lacagaha badan lagu bixiyo.
Wargayska Daily Mirror ayaa shaaciyay qiimaha lacageed ee ay maamulka Arsenal u diyaariyeen in Unai Emery uu suuqa xagaaga taas oo cadho wayn ku abuuri karta jamaahiirta kooxda Arsenal ee sanadaha badan ka soo daalay lacagta yar ee ay suuqa ku galaysay kooxdoodu.
Warkan ayaa lagu shaaciyay in Unai Emery loo hayo 40 milyan gini oo kaliya taas oo ay tahay in uu ciyaartoy dhawr ah kula soo saxiixdo waxayna lacagtani muujinaysaa in ayna Arsenal ku heli karin ciyaartoyda tayada sare leh ee ay kooxdeedu u baahan tahay.
Liiska ciyaartoyda ay Arsenal doonayso waxaa ugu horeeya xidiga kooxda Bournemouth ee Ryan Fraser kaas oo galaya sanadkiisii ugu danbeeyay ee qandaraaskiisa Bournemouth kaas oo iska diiday in uu heshiis cusub saxiixo waana mid ka mid ah ciyaartoy ay Gunners ku heli karto lacag aan badnayn.
Arsenal ayaa sidoo kale u baahan in ay hesho badalka Aaron Ramsey oo si xor ah kooxdeeda kaga baxaya marka uu xili ciyaareedkani dhamaado kadib markii uu heshiis rasmi ah u saxiixay kooxda Juventus laakiin si ay Arsenal u hesho xidig tayada Aaron Ramsey oo kale leh waxay u muuqataa in 40 milyan gini oo ay qorsha suuqeeda ka dhigtay ay muujinayso mid aan xaalada caawin doonin.
Arsenal ayaa shaqo ka qaban doonta sidii ay u hubin lahayd heshiisyada ciyaartoyda kooxdeeda kadib markii ay dhibaato badani ka soo gaadhay bixitaankii Alexis Sanchez iyo Aaron Ramsey oo isna heshiis kordhintiisa lagu fashilmay.
Laakiin iyada oo Arsenal wali ku dhibtoonaysa horyaalka Premier league waxaa layaab noqotay in maamulka Gunners ayna wali lacag badan u diyaarsan suuqa taas oo sii xumayn karta xaalada Arsenal maadaama oo ay kooxhaa waa wayn ee Premier league diyaar u yihiin in ay lacago badan kharash gareeyaan.
Si kastaba haatee, Unai Emery ayaa lacag ka samayn kara ciyaartoyda aanu doonayn in ay qorshihiisa ka mid noqdaan xili ciyaareedka soo socda.